FAQ-NANTONG GAOYA CO-DHISMEEDKA bir., LTD.
Waxaad tahay warshad soo saaridda ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay warshad soo saaridda. Waxaad soo dhaweeyay in ay na soo booqato waqti kasta. In isweydaarsiga,waxa ay leedahay nidaam dhamaystiran sare qalab samaynta dhismayaasha birta iyo darfihiisuba. Sidaas awgeed, waxaan xaqiijin karaa tayada wanaagsan iyo sidoo kale qiimaha tartan rasmi ah.
Waa maxay sababta aad doorato?
Tan iyo markii suuqa caalamiga ah ee galaya, aannu wada-hawlgalayaasha of companies.Partner badan oo ganacsi shisheeye noqdaan reer binu Israa'iil ku yidhi,"Waxaan dooran aadan oo kaliya sababtoo ah qiimaha iyo tayada,laakiin sidoo kale aad masuuliyad iyo daacadnimo kuwaas oo mudan in uu noqdo saaxiib la isku halayn karo. "
Sidee ku saabsan tayada aad?
First,Cuntooyinkan ayaa maray EN1090 CE iyo ISO9001:2008,taas oo macnaheedu yahay waxyaabaha our ayaa la tijaabiyey by saddexaad party.And hor ridaya-soo-saarka,oo dhan oo ka mid ah alaabta ceeriin waa in la baaro in wax soo saarka advance.During,waxaan leenahay taxane ah oo waraaqaha index processing, shaqaalaha la fuliyo sida uu qabo heerka iyo by-soo-saarka ay gacanta ku personnel.After tayada kormeero,waxaan leenahay injineerada si loo hubiyo tayada iyo qaadaan masuuliyadda this.
Sida loo helo xigasho aad ka?
Waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa waqti kasta by Email, WhatsApp, Skype iyo wax kasta oo siyaabo kale,oo na siiyo qaar ka mid ah macluumaadka aasaasiga ah,sida size gaar ah oo dhismaha,xajmiga iyo tiro ka mid ah albaabada iyo daaqadaha,waxyaabaha aad rabto in aad isticmaasho derbiyo iyo roof.After in,waxaan ku siin karnaa qiimaha qiyaas in 30 minute.If aad u baahan tahay in aad ogaato faahfaahin dheeraad ah oo ku,aynu wada hadlaan more.
aad ka bixin karto adeeg design?
Haa,waxaan heysanaa koox injineer iyo qorshee kara sida aad sawirka requirements.Architectural,jaantuska-dhismeedka,processing sawir faahfaahsan oo sawir rakibo lagu sameyn doonaa oo aynu aad u xaqiijiso in waqti kala duwan ee mashruuca.
waxa mar gaarsiinta?
waqtiga dhalmada waxay ku xiran tahay xajmiga iyo tirada building.Generally gudahood 30 maalmood ka dib markii la helo payment.And shixnad ka qayb loo ogol yahay amar weyn.
Ma waxaad u bixiyaan adeeg loogu rakibo?
Yes.We kale oo ay leeyihiin kooxda rakibo ah abroad.Firstly,sawiro rakibo lagu siin doonaa ka hor inta alaabtana yimaadaan caga port.If aad u baahan tahay,waxaanu kuu qabanqaabin karaa injineerada ay sameeyaan edbinta ku saabsan mashruuca weyn mashruuca site.For iyo shuruudaha macaamiisha ',waxaan ku siin karaan koox mashruuca oo dhan.
Waa maxay muddada bixinta?
30% deposit iyo 70% dheelitirka hor shixnad.